Borosy nify, borosy borosy namboarina, borosy nify malefaka - Enyuan
Huai'an Enyuan Tourist Products Co., Ltd. dia orinasa iray manokana amin'ny famokarana sy fanodinana ireo vokatra borosy nify, indrindra ao anatin'izany ny andiana borosy nify sy vokatra an-jatony maro hafa. Vokatra lehibe: borosy nify plastika, borosy nify sandoka, mpanala lela, borosy interdental, borosy nify, sns. Manara-penitra ary fenoy ny rafitra fitantanana kalitao. Ny velaran'ny orinasa dia mandrakotra velaran-tany mihoatra ny 4.000 metatra. Miisa 80 mahery ny mpiasa.
Mijere ao aorian'ny fijery!